China Usb-C hub-CH06A mveliso kunye nabenzi | Iqela leBrocade
Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi extender
Isidlulisi se4K HDMI
Isiciko seHDMI esingenacingo
Inkqubo yokuhambisa ividiyo ngaphandle kwamacingo
Isisombululo seGumbi leNkomfa
Indawo ye-usb-C hub-CH06A
▪ IAbrocade AI I-6 kwi-1 ye-USB yohlobo C yehabhu kukusetyenzwa kwemisebenzi emininzi iyandisa uxhulumaniso lweelaptop.
▪ Iza kunye ne-adapter esebenzayo ye-Type-C ekhoyo.
▪ Iziphumo zevidiyo ye-4K ye-HDMI: Inkxaso ye-4K @ 30Hz okanye i-1080P @ 60Hz imveliso yevidiyo. I-Mirror okanye yandisa isikrini senqaku kwi-HDTV, ukubeka iliso okanye iprojektha. Yonwabela iifilimu okanye umdlalo wevidiyo esweni. Bonisa i-PPT yakho ngokusebenzisa iiprojekti zeentlanganiso zewebhu.
▪ Ukuhanjiswa kweDatha ye-Ultra-High-Speed: 3 USB3.0 yokuhambisa ividiyo, umculo kunye neefayile ukuya kuthi ga kwi-5Gbps, ephindaphindwe kalishumi kune-USB 2.0. Ke unokugcwalisa ukuhanjiswa kwefayile ngexesha elifutshane kakhulu.
▪ Ukutshaja i-100W PD ngokukhawuleza: Ukuhanjiswa kwamandla kwe-100W kukuvumela ukuba ubize ikhompyuter yakho ngesantya esiphezulu. Ungasebenzisa iHub ngelixa utshaja.
Isantya esiphezulu kunye nokuSebenza
Isantya sokudlulisa idatha yamazibuko amathathu e-USB ukuya kuthi ga kwi-5Gbps. Yandisa isikrini sakho nge-HDMI port ukuya kwi-HDTV, ukubeka esweni okanye iprojektha. Inkxaso yokukhutshwa kwe-HDMI ukuya kuthi ga kwi-4K UHD (3840x2160 @ 30Hz) isisombululo
Ukuhanjiswa kwamandla kudityanisiwe
Uhlobo-c lokutshaja izibuko lunokudlula ukuya kuthi ga kumandla angama-100w, kwaye lubonelele ngombane owongezelelekileyo kwidiski enzima, umqhubi weDVD kunye nezixhobo ezixhume kwizibuko le-USB
Uhlobo lweMac loyilo lweFashoni
I-Hub iza nezinto ezikumgangatho ophezulu ezigudileyo ze-aluminium kunye ne-Uni-body Case. Iminwe-yokuprinta iminwe, ukusasaza ubushushu, uyilo olulula kunye nolwakhiwo. Isalathisi esiHlangeneyo se-LED. IHub iyandisa izixhobo zakho zonxibelelwano kwaye yonge indawo.
Okwangoku, iimveliso ze-Brocade ze-USB C ziye zathunyelwa kumazwe angaphezulu kwamashumi amathandathu nakwimimandla eyahlukeneyo, enje nge-mpuma ye-Asia, iMelika, i-Afrika, i-Mpuma Yurophu, i-Russia, i-Canada njlnjl. kunye nenxalenye eseleyo yomhlaba.
Siqinisekisa ukuba iBrocade izakuzama ngandlela zonke ukunciphisa iindleko zokuthenga zabathengi, ukunciphisa ixesha lokuthenga, umgangatho weemveliso ezizinzileyo, ukwandisa ukoneliseka kwabathengi kunye nokufezekisa imeko yokuphumelela.
Sijonge phambili ukuva kuwe, nokuba ungumthengi obuyayo okanye omtsha. Siyathemba ukuba uza kuyifumana into oyikhangelayo apha, ukuba akunjalo, nceda unxibelelane nathi kwangoko. Siyazingca ngenkonzo yabathengi ekumgangatho ophezulu kunye nempendulo. Enkosi ngeshishini lakho kunye nenkxaso!
Umgangatho wemveliso yethu ye-USB ilingana nomgangatho we-OEM, kuba iinxalenye zethu eziphambili ziyafana nomthengisi we-OEM. Iimveliso ze-USB C zigqithile kwizatifikethi zobungcali, kwaye asinako ukuvelisa iimveliso ezikumgangatho we-OEM kuphela kodwa siyakwamkela noku-odolwa kweeMveliso eziCwangcisiweyo.
Ngeemveliso zodidi lokuqala lwe-USB C, inkonzo ebalaseleyo, ukuhanjiswa okukhawulezileyo kunye nexabiso elifanelekileyo, siphumelele indumiso kubathengi bamanye amazwe '. Iimveliso zethu ze-USB C ziye zathunyelwa e-Afrika, kuMbindi Mpuma, mpuma Asia kunye neminye imimandla.
Egqithileyo Uluhlu olude 2624ft. Inkqubo yokuThunyelwa kweVidiyo engenazingcingo
Okulandelayo: Indawo ye-USB-C-CH06B
Izinto eziphathekayo Ingxubevange yeAluminiyam
Umsebenzi 3 * USB3.0 Ukuya kuthi ga kwi-5Gbps
1 * Uhlobo C ukuya kuthi ga kwi-5Gbps
I-1 * HDMI Ukuya kuthi ga kwi-4K UHD (3840 × 2160 @ 30Hz) / 1080p / 720p
1 * 3.5mm I-Audioconvenient ukusebenzisa
Xhuma kunye nokudlalaAkukho mfuneko yokuFakelwa koMqhubi
Ukuhanjiswa kwamandla Ubuninzi be-87W. 100W
Umbala Ngwevu / Luhlaza / Yamkela ulwenziwo
Ubukhulu 110 * 36 * 11 mm
Ubungakanani （ngephakheji） 161 * 90 * 22 mm
Ubunzima 63 g
Ubunzima （ngephakheji） 90 g
Isiqinisekiso 1 unyaka
Inkxaso yeNkqubo Window7 / 8 / 8.1 / 10, Mac OS x v10.6 nangaphezulu kwe-OS
I-OEM kunye ne-ODM I-OEM kunye ne-ODM
Isampulu Hlawula isampuli
Uluhlu olude 2624ft. Ukuhanjiswa kweVidiyo ngaphandle kwamacingo ...
Indawo ye-usb-C hub-CH08A
Ukubambezeleka kweZero kunye neNdleko- eyi-4K @ 60Hz HDMI E ...
Indawo ye-usb-C hub-CH07A
Uluhlu olude olungenacingo olungenazingcingo ze-4K uqhagamshelo lwe-HDMI ...
Idilesi:18 / F, Ukwakha i-6-2, i-Xinchuan Innovation kunye nePaki yeTekhnoloji, iZiko lobuchwephesha, Chengdu, China